IMC Kalium Relies on Ellicott® Bucketwheel Dredge -Ellicott Dredges
IMC Kalium waxay kuxirantahay Ellicott® Bucketwheel Dredge ee aduunka ugu hooseeya ee loo yaqaan 'Phosphate Mine'
Source: War-Saxaafadeedka Caalamka ee IMC
Awoodda sanadlaha ah ee ka badan toban milyan oo tan oo gaagaaban, IMC Kalium wuxuu ka mid yahay soosaarayaasha adduunka ugu soo baxa uguna jaban. Iyadoo iibka saafiga ah ee 1997 iyo saamiyada guud ee guud ee $ 617.4 milyan iyo $ 237.7 milyan, siday u kala horreeyaan, qaybta ganacsigu waxay u taagan tahay 14% awoodda adduunka.
IMC Kalium badeecadaheeda wax lagu iibiyo waxaa lagu iibiyay in ka badan 20 wadan intii lagu guda jiray 1997. Shiinaha wuxuu ahaa macaamiisha ugu badan ee wax dhoofisa qeybta ganacsiga, iibka badaha waxaa lagu tiriyaa 18% rarka Kalium sanadka gudihiisa. Shixnadaha loo daabulay beeraleyda Mareykanka iyo dadka isticmaala warshadaha ayaa kala ahaa 55% iyo 13%, siday u kala horreeyaan. Beeraha iyo adeegsiga warshadaha ee Kanada waxay noqdeen 4% wadarta rarka.
IMC Kalium waxay ka howlgashaa shan miino halka sedexda miinana ee US IMC Kalium ay ku tilmaamayso Belle Plaine, Saskatchewan Canada, habka xalka macdanta inay tahay "macdanta ugu qaalisan aduunka." Waxay soo saartaa nadiifin sare oo cad oo ka mid ah potash ugu horreyn suuqyada warshadaha.
Si loo soo celiyo potash-ka, miinada Belle Plaine waxay isticmaashaa Ellicott® B-490-korantada korantada ku shaqeysa ee bulukeetiga taasoo sameysay si aaminnimo ah sannado.
IMC Kaliumthrough adeegsiga uumiga ay maamusho kumbuyuutareedka iyo farsamooyinka kicinta.
Isku soo wada duuboo, xalka waxaa lagu tuuraa barkad qaboojiye ah oo loo yaqaan '130-acre' halkaas oo qaylo dhaan dheeri ah ay ka dhaceyso badeecada ka soo baxana waxaa lagu soo kabanayaa Ellicott® sabuuradda dusheeda Sunta dib loo sifeeyay waa mid la waraabin jiray, la qalajiyey oo cabbirkiisu yahay.
Product The - IMC Kalium waxay samaysaa badeeco badan oo kaladuwan ah, qaar ka mid ah iyaga oo maraya habraacyo sharciyeysan Waxay ku bilaabmaysaa burburin macdanta oo ku dhacda qaybo shaqsiyeed oo ah dheriga iyo cusbada mid kasta oo ka yar 3 / 8 inji dhexroor. Saliida la jajabiyey ayaa markaa lagu qaso brine, xalka cusbada leh, waxaana lagu tuuraa shaashadaha 10-mesh, oo qiyaastii le'eg muraayadaha daaqadaha guriga. Walxaha waaweyn oo shaashadda u weeciyay u gudbiya warbaahinta culus. Walxaha yaryar ka soo dhacaan oo aadaan Flotation. Xaaladda qolka kontoroolka dhexe ee kumbuyuutareedka, isbeddelada howlaha dusha sare ayaa si joogto ah loola soconayaa si loo hubiyo badeecadaha tayada leh.
Warbaahinta culus - Hawshan, walxaha waaweyn ee aan la diyaarin ee potash iyo cusbada waxay ku qasan yihiin brine iyo magnetite. Awoodda gaarka ah ee xalka miyir-qabka warbaahinta ayaa ah in potashdu ku dul sabayn doonto dusha sare oo cusbada iyo nijaasta ay hoos ugu soo dhici doonaan xagga hoose. Dheriga saboolka ah, ama ka samaysan walxaha isku qasan, ka dib waa la maydhaa, la wasakheeyaa oo la qalajiyaa. Waxyaabaha qaarkood, ee loo yaqaanno middlings, kuma kala soocna geedi socodka warbaahinta culus. Iyaga ayaa dib loo jajabiyaa, la baari doonaa, oo waxaa loo hagaajiyaa ubaxaynta.
Dalxiis - Marka hore, walxaha aan la isticmaali karin iyo badeecada (brine) waxaa laga soo qaadaa qashin-qodidan yar yar ee saliida ah habka loo yaqaan 'desliming'. Marka ku xigta, dhagaxu wuxuu ku xareeyaa walxaha kiimikada ah ee isku dhejiya walxaha ka samaysan dheriga. Kadibna waxaa lagu qaso brine. Masaafadaani waxaa lagu ridayaa haanta biyaha lagu duubo waxaana hawo lagu durayaa isku darka. Walxaha iskuxiran ee potash-ku waxay isku dhejinayaan xumbada hawada waxayna sare ugu kacaan dusha sare iyagoo soo saaraysa heerarka Heerarka iyo Khaaska. Dheriga dheriga ayaa la duugay, la qariyey oo la qalajiyey. Cusbada aan la bogsan waxay sii ahaataa, iyadoo ugu hooseysa.
Qaylada 'Crystallization' - Ganaaxyada, ama boodhka 'potash', waxaa lagu soo ceshanaa ururinta boodhka iyo habraaca ubaxaynta. Ganaaxyada waxaa lagu kala dirayaa brine kuleyl leh oo dib loo warshadeeya iyadoo la qaboojinayo seddex marxaladood, iyadoo la soo saarayo kiristaalo dheeri ah oo saafi ah (White Muriate). Qayladaas waa la gooyay oo la qalajiyey. Muriate-ka cad waxaa lagu nadiifin karaa boqolkiiba 99.9 saafi ah oo dib loo sharraxay KCL iyada oo loo marayo dib-u-kicinta. Dib loo sifeeyay KCl waa mid saafi ah waxaana lagu isticmaalaa warshadaha kiimikada.
Wada-shaqeynta Dheriga dhaldhalaalka ah waxaa sameeya cabirka cadaadiska sare ee cabirka jaangooyooyinka caadiga ah iyo kuwa gaarka ah ee loo yaqaan 'digriiga jajaban' kaas oo la jajabiyey lana baaray illaa cabbirka.
Hal Talaabo Dheeri ah - Darajooyinka badankood waxay qaataan daaweyn gaar ah oo lagu ilaaliyo inta lagu guda jiro dhoofinta. Haddii alaabtu aad u qalalan tahay, waxay u egtahay inay boodh badan tahay. Hadday qoyan tahay, waxay u egtahay keeg. Si looga hortago in boodhka ama shaybaarka, sheyga waxaa lagu buufiyaa saliid iyo amine isku dar ah ka hor intaan la xirin. Muriate White waxaa lagu daaweeyaa oo keliya amine; Tixraaca KCl uma baahna daaweyn.
Waxaa laga soo xigtay IMC Global Press Release iyo bogga internetka ee IMC Kalium